Rakcad OEM Madax iyo warshad ku habboon iyo alaab-qeybiyeyaal | Ouzhan
Naxaasku waa shey ka kooban naxaas iyo zinc, waana shey ku habboon wax soo saarka qaybaha mashiinnada (oo ay ku jiraan qaybo been abuur ah). Dareemida Die waxaa loo soo gaabiyaa sida been abuur, taas oo ah habka loo shubay taas oo dareeraha daawaha ah ee la shubay lagu shubo qolka saxaafadda, daloolka caaryada birta ah waxaa lagu buuxiyaa xawaare sare, dareeraha daawaha ah ayaa lagu xoojiyaa cadaadiska si loo sameeyo kabka. Faa'iidada Ouzhan had iyo jeer waxay ahayd in la habeeyo walxaha naxaasta ah, taas oo ah, filtarka ka samaysan naxaasta, kuwaas oo ah qaybaha warshadaha. Nidaamka wax soo saarka waxaa markii ugu horreysay soo saaray Ningbo, Zhejiang oo ku yaal Shiinaha.
OEM naxaas Madax iyo habboon tolida qaybo - sax naxaas been abuurtay qalabka mashiinada processing
Naxaasku waa shey ka kooban naxaas iyo zinc, waana shey ku habboon wax soo saarka qaybaha mashiinnada (oo ay ku jiraan qaybo been abuur ah). Dareemida Die waxaa loo soo gaabiyaa sida been abuur, taas oo ah habka loo shubay taas oo dareeraha daawaha ah ee la shubay lagu shubo qolka saxaafadda, daloolka caaryada birta ah waxaa lagu buuxiyaa xawaare sare, dareeraha daawaha ah ayaa lagu xoojiyaa cadaadiska si loo sameeyo kabka. Faa'iidada Ouzhan had iyo jeer waxay ahayd in la habeeyo walxaha naxaasta ah, taas oo ah, filtarka ka samaysan naxaasta, kuwaas oo ah qaybo warshadeed. Nidaamka wax soo saarka waxaa markii ugu horreysay soo saaray Ningbo, Zhejiang oo ku yaal Shiinaha. Horraantii 1980-meeyadii, Ningbo, Gobolka Zhejiang wuxuu hoggaanka u qabtay horumarinta geeddi-soo-saarka wax soo saarka, kaas oo beddelay taariikhda dheer ee adeegsiga fureyaasha birta ee Shiinaha. In habka wax soo saarka, habka wax taaj oo kale u shubay ciid ayaa markii ugu horeysay la ansixiyay, iyo geedi socodka been abuur ah ayaa la beddelay horaantii 1990. Horumarka ilaa bilowgii qarniga 21aad, Shiinaha wuxuu ku horumaray xarunta wax soo saarka maareynta maarta ee dunida.
Qalabka Ouzhan Valve iyo Qalabka tuubbada ayaa la soo saaray
Faa'iidooyinka Shanghai Ouzhan qaybo been abuur ah:
- Fududeynta heerka sare
Waxyaabaha wanaagsan ee farsamada iyo geedi socodka
Rakiban Custom brass Valve and Pipe fittings forging qaybo farsamo
Waxyaabaha Naxaas, Bir aan xadi lahayn, birta kaarboonka, iwm
Daaweynta dusha sare Daaweynta dusha sare ee naxaasta ayaa loo habeyn karaa iyadoo loo eegayo shuruudahaaga, sida habka korantada, habka dahabiga dahabka, habka xardho, elektroolka
Nidaamka ugu muhiimsan Been abuurka
Isticmaalka Biyo bixinta iyo dhuumaha bullaacadaha, tuubooyinka jiingado, tuubooyinka serpentine, tuubooyinka isku ururaya, xabbadaha rasaasta lagu rido iyo alaabada kaladuwan ee feerka isku dhafan, qaybaha qalabka yaryar, iwm
Hore: Soo saaraha Shiinaha CNC caado ka sameysan qaybo bir ah oo la shiiday